Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 4t l0812 lar
Alarobia 21 Nov.
Ny fiangonana izay voalaza fa “nantsoin’” Andriamanitra, “vahoakan’Andriamanitra”, “tenan’i Kristy” ary “tempolin’ny Fanahy Masina”, dia natao hanompo na hamita iraka. Tena ilain’ny fiangonana tokoa ny firaisana satria raha tsy misy izany dia tsy afaka manatanteraka amim-pahombiazana ny iraka nampanaovina azy izy. Tsy mahagaga raha tao an-tsain’i Kristy ny olana mikasika io firaisana io rehefa nanakaiky ny fifaranan’ny fiainany teto an-tany (1 Jao. 17:21,22).
Nivavaka ho an’ny firaisan’ny fiangonana i Jesôsy (Jao. 17:21,22); nampirisika ny mpino mikasika izany i Paoly (Rôm. 15:5,6). Ahoana no tokony hahatakarantsika ny firaisana araka ny anehoana azy ao amin’ireo andininy ireo? Inona no hevitr’io firaisana io?
Tafiditra mazava tsara ao anatin’io firaisana nentin’i Kristy tamim-bavaka io ary koa nentin’i Paoly nampirisika ny mpino io ny firaisan’ny fihetseham-po, ny eritreritra, ny asa sy ny maro hafa. Tsy hoe firindrana vokatry ny fahaiza-mandamin-draharaha izany, na koa fahaiza-mitantana na ihany koa paik’ady ara-pôlitika. Izany dia fanomezana atolotra ny mpino amin’ny alalan’i Kristy mitoetra ao amin’izy ireo (Jao. 17:22,23) ary hazonin’ny herin’Andriamanitra Ray (Jao. 17:11).
Vakio ny 1 Kôr. 1:10 sy ny 2 Kôr. 13:11. Ahoana no hanatanterahantsika ny antso ataon’i Paoly ao amin’ireo andininy ireo?
Tsy iadian-kevitra intsony ny maha-olona samy hafa antsika, samy manana ny fomba fijeriny ka io indrindra matetika no mampanano sarotra ny hisian’ny firaisana. Na dia sarotra ialana aza ny fahasahiranana sy ny fahaporetana eo amin’ny ambaratonga samihafa eo anivon’ny fiangonana, dia ilaintsika mandrakariva ny manana toe-tsaina feno fanetren-tena sy fandavan-tena ary faniriana hanao zava-tsoa. Ny ankamaroan’ireo antony mampisy ny fizarazarana dia noho ny fitiavan-tena sy fireharehana ary faniriana hanandratra ny tena sy ny fomba fijerin’ny tena ho ambony noho ny hafa. Tsy misy tanteraka amin’izany anefa isika rehetra ary tsy misy amintsika mahatakatra tsara ny zavatra rehetra ihany koa. Na inona na inona tsy fitoviana hitranga, raha samy mitondra ny hazo fijaliantsika isan’andro avokoa isika rehetra, maty amin’ny tena isan’andro, mikatsaka izay mahasoa ny hafa fa tsy ny antsika ihany ary koa ny soa ho an’ny fiangonana iray manontolo, dia maro amin’ireo olana itolomantsika sy misakana ny asantsika no ho foana hatreo.
Raha fehezina, dia miantomboka amintsika tsirairay avy manokana ny firaisana, amin’ny maha-mpanara-dia an’i Kristy antsika - tsy amin’ny anarana fotsiny fa amin’ny fiainana feno fanoloran-tena marina; fiainana vonon-kanao ny tsara mandrakariva.